आजको संसारमा, मोबाइल फोन हामी प्रत्येक को जीवन मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। एक युगमा वैज्ञानिक र प्राविधिक प्रगति को सेलुलर उत्पादन को फोन छैन अझै पनि जब नयाँ ह्यान्डसेटमा छनौट महत्त्व बिना अद्यावधिक सञ्चालन प्रणाली, नयाँ सुविधाहरू, र डिजाइन नै खडा। नयाँ के संग राख्ने क्रममा हामी धेरै आफ्नो फोन चमकता को सेवाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर सबैले यो के हो थाह छ।
यसको सफ्टवेयर अपडेट गर्न नयाँ उपकरण (खेलाडी, स्थापना मतलब जो - फोन Reflash मात्रा नियन्त्रण, , फ्लैश, आदि) र सामान्य मा सुविधाहरू थप्न, तपाईँको यन्त्र थप आधुनिक र प्रयोगकर्ता-अनुकूल बनाउन। एक सामान्य नियम जस्तै, माइनस सही फोन फर्मवेयर अद्यावधिक छैन, र तपाईंले घरमा आफैलाई बनाउन सक्छ।
पहिले तपाईं आफ्नो फोन Flash, तपाईं यसलाई आवश्यक किन बुझ्नुपर्छ। "मरम्मत" को लागि कारण एक ढिलो प्रतिक्रिया उपकरण, बारम्बार झुन्डिएका, कुनै स्पष्ट कारण लागि बन्द, र अन्य रोगबाट हुन सक्छ। फ्लैश फोन स्पष्ट कारण बिना पनि हुन स्थान हो। तपाईं चाहनुहुन्छ भने आफ्नो उपकरण फेला छ नयाँ कार्य फेसनदार Flash आवेदन, खेल र संगीत कायम गर्न सक्छ, यो सफ्टवेयर पुन प्रयास गर्न लायक छ। पछि यस्तो स्वागत संकेत, रूपमा चमकता र मापदण्डहरू सुधार अडियो मात्रा, रंग को चमक। पनि स्रोतहरू ब्याट्री को आफ्नो फोनमा फर्मवेयर पछि धेरै उच्च बन्न सक्छ।
घर मा आयोजित फोन reflash गर्न, तपाईंलाई आवश्यक:
सीधा फोन नै गर्न
विशेष डाटा केबल
केबल र फोन को लागि चालकहरुको
फर्मवेयर को हालको संस्करण
साथै, तपाईंले सुरू गर्नु अघि, तपाईं शब्दावली को मूल कुराहरू सिक्न आवश्यक:
Reflash - आफ्नो फोन सफ्टवेयर अपडेट गर्न प्रयोग। तपाईंको उपकरणको सबै सेटिङ खुलिरहेको छन्।
फ्लेक्स - एक मोबाइल उपकरण प्रयोग गरिएको फाइल प्रणाली। यो फोन पुस्तक, सबै ध्वनि, संगीत, चित्र, आवेदन र खेल समावेश छन्।
LangPack - यो उपयोगिता सबै फन्टहरू, यन्त्र द्वारा समर्थित भाषाहरू छन्। तपाईं आफ्नो मोबाइल फोन russify गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यो प्याकेज आवश्यक हुनेछ।
FullFlash - माथि उपयोगिता सबै, अतिरिक्त थपिएको (मल्टिमिडिया आवेदन, स्थापित आफ्नै कार्यक्रम, र यति मा) यो प्याकेज छन्।
तपाईं गम्भीर आफ्नो फोन चमकता रुचि राख्नुहुन्छ भने तपाईं माथि प्याकेजहरू सबै, आवश्यक छ।
आज धेरै कम्पनीहरु, कम्पनीहरु र व्यक्तिहरूलाई सफ्टवेयर मोबाइल फोन पुनर्स्थापित मा लगे छन्। विशेषज्ञहरु पनि धेरै प्रयास खर्च, बिना चाँडै र सही यसलाई गर्न सक्षम हुनेछ। तपाईं गम्भीर आफैलाई गर्न निर्णय गर्नुभएको छ भने, हामीले तपाईंलाई सबै सफ्टवेयर को प्रतिहरू बनाउन सुरु गर्नु अघि सल्लाह, र त्यसपछि सुरक्षित काम सुरु गर्नुहोस्।
चिनियाँ मूल फोन चमकता आफ्नो युरोपेली वा अमेरिकी समकक्षों काम भन्दा धेरै कम समय लाग्छ। निर्माता यसलाई आवश्यक सफ्टवेयर नै जटिल विचार छैन, त्यसैले फोन जस्ता फर्मवेयर पनि साईट प्रोग्रामर जटिल छैन।
प्रत्येक निर्माता को सबै हार्डवेयर घटक विशेष व्यक्तिगत, त्यसैले तपाईं को उत्कृष्ट विचार महसुस यदि सैमसंग बाट उपकरण मा नोकिया सफ्टवेयर "भर्न", यो तपाईं त आफ्नो फोनमा हुनेछ भनेर असम्भाव्य छ। यस्तै प्रयोग को नै लाइन भित्र अनुमति, तर जीवन मोबाइल को जोखिममा। तपाईं Wolkman मा सोनी Ericssson K750I रूपान्तरण, तर गर्न सक्नुहुन्छ नवीनतम पुस्ता ग्यालेक्सी एस द्वितीय को सैमसंग GT-C3011 मोबाइल फोनबाट आएको पक्कै यो काम छैन!
मोबाइल फोन को दायरा भित्र फर्मवेयर को ठूलो फाइदा भद्र मुद्रा को लागि तपाईं सबै फैंसी सुविधा र कार्यक्रम साथ नवीनतम पुस्ता उपकरण प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई छ। तर यो गर्दैनन् अचानक तपाईं यस्तो ब्लुटुथ, उच्चतम संकल्प क्यामेरा, आदि सुविधाहरू हुनेछ भनेर विश्वास गर्न अनुभवहीन हुन छैन। तर तपाईं पक्कै पनि नयाँ विषयवस्तुहरू, वालपेपर र खेल को मालिक हुनेछ, र फोन नै थप nimble र हार्डी हुनेछ।
मोबाइल फोन ब्ल्याकबेरी Q10: एक अवलोकन, विनिर्देशों, समीक्षा
स्मार्टफोन ब्याट्री: कसरी राम्ररी पहिलो पटक चार्ज गर्न?
एक धातु शरीर र2सिम कार्ड को लागि एक शक्तिशाली ब्याट्री संग पातलो स्मार्टफोन। एक धातु आवास सर्वश्रेष्ठ स्मार्टफोन
नाम मूल्य लेव - एउटा नाम मेरो मा के
Bromhexinum: प्रयोगको लागि निर्देशन
तर कसरी ह्विप गर्न
Onegin stanza - stanza एक सुन रूस छ
Mahov Bilyal - मजबूत हैवीवेट ग्रह
परिदृश्य जन्मदिन केटी - भनेर एक रोचक छुट्टी लागि आवश्यक के!
UMP-421 इन्जिन: निर्दिष्टीकरण
हेरविचार कोठा ओपेरा कार्टून अक्षर कसरी लिन
पुरुष फर्न (Dryopteris पुरुष): वर्णन, गुण, प्रयोग लोक चिकित्सा मा
बेडरूम कला नोव्यू